Kedu ihe bụ Permalink? Sochie? Post slug? Ping? | Martech Zone
Anọ m na nri ehihie mara mma taa na ụfọdụ ndị ahịa nwere ọgụgụ isi sitere na Indianapolis niile. Kwa izu 4 ruo 6 anyị na-ezukọ iji tụlee akwụkwọ azụmaahịa ọhụrụ (ma ọ bụ ewu ewu). Ọ bụ nnukwu ohere ịpụ n'ọfịs ma pụọ ​​na nkọwapụta wee laghachi n'ụfọdụ 'nnukwu eserese' na-eche echiche. Offọdụ ndị folks na-ebipụta na mgbasa ozi, ndị ọzọ bụ ihe ọmụma Internetntanetị. Otu okwu m nụrụ taa gbagwojuru ụfọdụ anya ịde blọgụ. Enwere m ike itinye ụfọdụ n'ime ihe a na ndu E-metrics m na-ede, mana ọ bara uru ntinye blog, agbanyeghị:
Kedu ihe bụ Permalink?
A permalink bụ 'njikọ na-adịgide adịgide' na post gị. Nke a bụ atụmatụ nwere ike ịchọ ka enyere gị na blọọgụ gị, ọ na-enye onye ọrụ ohere ịkọwa otu, ederede, adreesị weebụ maka ntinye ọdịnaya ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, isiokwu E-metric ahụ m kpọtụrụ aha n'elu nwere permalink nke:
Gịnị bụ sochie?
Trackbacks dị ike mana ndị spammers na-emegbu ya ugbu a. Nke a bụ otu ha si arụ ọrụ… A blogger na-agụ post gị ma dee banyere gị. Mgbe ha bipụtara, blọọgụ ha ekwesighi blog gị site na ịnyefe ozi ahụ na adreesị sochie (zoro na koodu peeji).
Nke ahụ na-enyere gị aka ịhụ na mmadụ na-ede banyere post gị na ịntanetị. Ọ bụ ngwa ọrụ dị ịtụnanya maka na ọ naghị emetụta ma ọ bụ ụzọ isi gwa mmadụ na ị dere banyere ma ọ bụ na-agafe ozi gị na blọọgụ ha. Na-eji Trackbacks mgbe ị na-atụle post mmadụ ma ọ bụ blog. Ọ bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụrụ n’ị ga ede maka ha, ikwesiri inye ha ohere ịza.
N'ezie, nke a bụ ọla edo maka ndị spammers. Ha na-eji sọftụwia na-ata ahụhụ na saịtị gị na URL ha chọrọ ka ị gaa ma ha edeghị banyere gị ma ọlị. N'ihi nke a, anyị agafeela ma nwee nkwarụ na ntọala WordPress anyị.
Kedu ihe bụ Post slug?
A post slug bụ ederede ederede maka post. Iji ihe atụ dị n'elu, post slug bụ ịde blọgụ-e-metrics. Ihe ogugu nke post a bu 'blog-jargon'. Ọ bụrụ na ị nwere ọnụọgụ na njedebe nke post gị, ịkwesịrị ịkwado Permalinks na blọọgụ gị. Nke ahụ na-enye ohere ka ederede ederede, hierarchical URL maka post ọ bụla na ibe ọ bụla na saịtị gị. Nke a nwere ike bara uru maka igwe na - achọ ihe… iji Keywords na post slugs gị nwere ike inye aka! Ikwesighi ichegbu onwe gị banyere ide ihe a oge ọ bụla, agbanyeghị software sọftụwia ịde blọgụ gị kwesịrị imere gị ya. Mgbe ụfọdụ ọ na-amasị m ibelata ha obere na ogologo aha dị ka post nke abalị!
(Short for Pingback) Ozugbo ejiri naanị nwalee nkwukọrịta n'etiti kọmputa abụọ na netwọkụ, ugbu a 'pings' agbanweela maka ịde blọgụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike pings na blọọgụ gị, blọọgụ gị ga-atụgharị ọrụ nnata na-akpaghị aka iji mee ka ha mata mgbe ị bipụtara na blọọgụ gị Nke ahụ na - enye ohere ka igwe nchọgharị ahụ 'dọrọ' saịtị gị maka ọdịnaya wee debe gị. M ping 5 ọrụ si n'ebe… ha nwere ike ugboro ugboro ma m na na na na:
Ọrụ ndị a, n'aka nke ya, na-esochi ma debe ọdịnaya m n'ime igwe ọchụchọ ha yana nyefere ha n'aka ndị ọzọ. Gbaa mbọ hụ na enyere pings aka na saịtị gị!
Maka ozi ndị ọzọ, Wikipedia: Sochie, Permalink, ping
Tags: Blog jargonteknụzụ blogjargonPermalinkpingslugslugsochieKedu ihe bụ permalinkKedu ihe bụ pinggịnị bụ post sluggini bu a sluggịnị bụ trackbackkedu ihe permalinkkedu ihe pingKedu ihe bụ post sluggịnị bụ trackback
Kwado ICRA ma gosi ọdịnaya dị na saịtị gị
Ntụnye 10 iji meziwanye Digg
Sep 22, 2006 na 2:21 PM
M na-eji http://pingomatic.com/ na mgbakwunye na itinye mgbakwunye ọrụ ping ndị ahụ na nhọrọ WP m.
Sep 23, 2006 na 10: 40 AM
Yvonne: PingGoat enwere adreesị ping na-akpaghị aka m nwere ike itinye na WordPress?
SeanRox: Daalụ! Ee, anyị kwesịrị ịga n’ihu dee ndụmọdụ na aghụghọ a. Ndi be anyi kwesiri ima!
TechZ: Pingomatic bu otu n’ime ping ping ekwuru na post… i ji ya aka?
Sep 23, 2006 na 7:57 PM
Nope, mana ị nwere ike ịchekwa otu adreesị dị ka ibe edokwubara, wee gaa na ya mgbe ọ bụla ịchọrọ. Ọ na-ewe ihe mmezi otu abụọ iji gaa leta ya aka. 🙂
Sep 24, 2006 na 8: 34 AM
Yvonne, anaghị m eji aka ya, ọ bụghị ọzọ 😉 Nke ahụ bụ ọrụ m jiri tupu m tinye aha ping n'ime nhọrọ WP m.
Ọkt 13, 2006 na 9:54 AM
ọ ga - ekwe omume iji trackbacks maka ihe ndị ọzọ? Anọ m na-enweta ọtụtụ trackbacks na otu blog ahụ na Keywords dị egwu na-ezo aka na ọgwụ, n'ihi ya ọ na-enyo m enyo. Anọ m na-ehichapụ ha. O ruru ebe ọ na-ewe iwe, ma na-eme ọtụtụ mgbe, na m ga-ehichapụ nhọrọ m na-agagharị. Yabụ ọ bụ ezie na ị na-ekwu maka ya ịbụ "nnabata," Ana m eche etu ọ ga-esi bụrụ mmegbu, n'ihi na nke ahụ bụ ihe ọ dị ka ọ bụ maka saịtị blọgụ m (nke bụ saịtị ọmụmụ ọdịbendị maka ụmụ akwụkwọ m).
Ọkt 13, 2006 na 2:30 PM
Ee, nke ahụ bụ spamback trackback. I nwere ike ịlụso ya ọgụ. Ebe a ozi ndị ọzọ.
Jenụwarị 29, 2007 na 4:29 PM
Ejirila trackbacks m na-apụ apụ na blog WordPress.
Ọ dị onye maara nke ngwa ọrụ nke atọ m nwere ike ịgba ọsọ na blọọgụ iji mepụta trackback na-akpaghị aka?
Jenụwarị 29, 2007 na 11:29 PM
Nke ahụ na-atọ ụtọ - Anụbeghị m banyere nke ahụ na-emebu. X nwere xmlrpc.php gị ebe? You na-apụ apụ? (Ọ na-eji otu faịlụ). I nwedịrị ike ịnwale ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ… Echere m na ị ga - etinye data na ibe gị site na mpempe iji hụ ma ọ na - arụ ọrụ.
Ọ bụ ihe etinyere maka ndị ọrụ WP.com.
Emechaala m ule na ọ dị ka trackbacks m na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na m zigara ha aka, ọ bụ akpaka pingbacks na-agbajikwaara m.
Jenụwarị 4, 2008 na 12:39 PM
Daalụ maka post a Doug! Are bụ ezigbo enyemaka!
Ihe egwuregwu Flash
Jenụwarị 11, 2008 na 6:26 PM
Daalụ maka post a na-akọwa ụfọdụ n'ime usoro. Nyere m aka nke ukwuu! Ugbu a ka m matara.
Feb 23, 2012 n’elekere 2:27 nke abali
Otu oge blog gị gosipụtara na ị bụ onye na-ede blọgụ na-aga nke ọma. Daalụ maka ịkekọrịta okwu ọhụụ dị ka post slug na post ping.